Pfungwa dzeHofisi Kune Vashandisi Vemavhiri | Karman® Mawiricheya
Pfungwa dzeHofisi Kune Vashandisi veWiricheya
Kuwedzera Kubudirira KuImba Yako Yekumba
Kuva pamba kwenguva yakareba kunoita kuti ufinhire uye usabudirire. Kana iwe ukawedzera hofisi yekumba zvinokukurudzira kuti utange kushanda kubva kumba kana usati watove. Izvo hazvidi kuve chinhu chakapenga ingori nyore tafura uye komputa uye imwe hofisi yakati wandei midziyo. Ramba uchifunga muhofisi midziyo inofanirwa kungova chete kana uine bhizinesi kana iwe uchinzwa sekunge urikuda. Muchikamu chino, iwe uchazoziva kana kuwedzera hofisi yekumba inokodzera iwe uye kuti ungatanga sei kuwedzera hofisi yekumba kumba kwako.
Rangarira kuti haudi imwe yekuwedzera kamuri kuti uwedzere hofisi yekumba. Iwe unogona kungoshandisa kona kana imwe nzvimbo yemadziro epasi kuti uwane iwe zvaunoda. Mushure mekunge mawana nzvimbo iyo yamuri kufara nekuenderera mberi nekuronga. Ratidza izvo zvaunoda muhofisi yako yekumba uye bhajeti yako. Kana iwe uchida hofisi yezvinangwa zvebhizinesi saka bhajeti yako inofanira kuve yakakura kwazvo kupesana neimba yekunakidzwa. Bhurawuza mawebhusaiti anoita runyorwa rwezvaunoda muhofisi nzvimbo uye uve nechokwadi kuti zvichiri maererano nebhajeti rako. Unogona zvakare kushandisa komputa yako yazvino kana uchitova nemumwe wako unogona kutenga iri nani. Kana bhajeti yako isina kukura saka unogona kufunga nezve kutenga zvese zvinoshandiswa pamawebhusaiti senge EBay. Ivo vanopa yakakura sarudzo yezvinhu zvakasiyana zvaungangoda uye zvakare zvakasiyana pezvitsiga kusarudza kubva. Zvimwe zvinowedzera iwe zvaungade kufunga muchirongwa chako zvinosanganisira mwenje, masherufu ari kuyangarara, uye shredder.
Kana hurongwa hwekutanga yako itsva Imba yekugadzirira yagadzirira saka iwe unofanirwa kuraira zvese kana kuenda kunzvimbo yepanyama. Ita shuwa kuti nzvimbo yauri kuzoisa zvese yakanaka uye yakachena uye yakagadzirira kuenda. Sevha marisiti ezvese zvinhu kuitira kana chimwe chinhu chikasaitika chikashanda uye unogona kuchidzorera mangwana acho. Ita kuti mumwe munhu aronge dhesiki munzvimbo yaunoda uye chingave chiri zano rakanaka kuti tafura iiswe pamberi pehwindo nekuti ichakupa imwe yekuona kune kunze kweimba yako. Wedzera mamwe mabhuku ku masherufu akayangarara ita kuti vaonekwe seuri kuvashandisa zvakanaka kana pamwe wedzera zvimwe mifananidzo kuzviita zvishoma.
Paunenge uchinge wapedza nekumisikidza zvese kumusoro kune yako nyowani hofisi yekumba unogona kutanga kuve unogadzira uye wotanga kumhanyisa rako bhizinesi diki kana iwe uine rimwe. Uine yako itsva nzvimbo yehofisi, iwe unomuka uchifa kuti usvike kubasa izvozvi sezvo usiri kushanda patafura yako yekicheni kana tafura yako yekofi. pano iri blog post kuti ikubatsire iwe kufemerwa kugadzira yako wega. Izvo zvinosanganisirawo yakawanda mienzaniso yevanhu vakashandura nzvimbo diki dzakashandurwa kuita nzvimbo inoshandiswa.